‘စံ’အမည်နဲ့ ဒုတိယမြောက် စာအုပ်ကို မကြာခင် ထွက်ရှိလာတော့မယ် ဆိုတဲ့ ဇဏ်ခီ – Cele Posts
‘စံ’အမည်နဲ့ ဒုတိယမြောက် စာအုပ်ကို မကြာခင် ထွက်ရှိလာတော့မယ် ဆိုတဲ့ ဇဏ်ခီ
ဇဏ်ခီကိုတော့ မင်းသား တစ်လက်အနေနဲ့ပရိသတ်တွေ သိရှိထာပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ ဇာတ်ကား(၃)ကားသာ ထွက်ရှိထားပေမယ့် ပရိသတ်အားပေး မှုများစွာနဲ့အတူ အောင်မြင်တဲ့ မင်းသား တစ်လက်အဖြစ်ရပ်တည်နေခဲ့ပါပြီ။ ဇဏ်ခီကတော့ သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက် အနေနဲ့တင်မကပါဘူး တေးရေး၊အဆိုတော် တစ်ယောက်လည်းဖြစ်သလို ဇာတ်ညွှန်းရေးဆရာ တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်နေပါသေးတယ်။
ဘက်စုံထူးချွန်တဲ့မင်းသား ကတော့ “ကိုယ်တိုင်သိရှိသွားမှု” ဆိုတဲ့ စာအုပ်လည်း ထွက်ရှိထား တာဖြစ်ပြီး လူကြိုက်များကာ အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ အခုလည်း စာအုပ်အသစ် ထွက်ရှိလာဖို့ရှိနေပြီး ပရိသတ်တွေကတော့ စောင့်မျှော်နေကြတာပါ။ ဒုတိယမြောက် စာအုပ်အမည် ကတော့ “စံ ” ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေဆီ မကြာခင်ရောက်ရှိ လာတော့မယ့်အကြောင်းကို “ကျွန်တော့်ရဲ့ဒုတိယမြောက်စာအုပ် “စံ” ကို preorder မှာရင် လက်ဆောင်ထည့်ပေးမယ့် bookmark လေးတွေပါ.. ဒီဇင်ဘာလထဲမှာ ထွက်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ Preorder တင်လို့ရမယ့်အချိန်ကို ပြန်ပြောပြပါ့မယ်။” ဆိုပြီးဖေ့ဘွတ်ခ်မှာ ရေးသားထားတာပါ။
ပရိသတ်တွေ ကတော့ ဇဏ်ခီရဲ့ ကိုယ်တိုင် သိရှိသွားမှု ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကနေပြီး အတွေးတွေ ထပ်တူကျပြီး ကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့ကြရသလို ဒုတိယမြောက် စာအုပ်ကလည်း ပိုတောင်ကောင်းမွန် နေမလားဆိုတာ ဖတ်ကြည့်ချင်နေကြပြီ ထင်ပါရဲ့နော်….
‘စံ’အမညျနဲ့ ဒုတိယမွောကျ စာအုပျကို မကွာခငျ ထှကျရှိလာတော့မယျ ဆိုတဲ့ ဇဏျခီ
ဇဏျခီကိုတော့ မငျးသား တဈလကျအနနေဲ့ပရိသတျတှေ သိရှိထာပွီးသား ဖွဈမှာပါ။ ဇာတျကား(၃)ကားသာ ထှကျရှိထားပမေယျ့ ပရိသတျအားပေး မှုမြားစှာနဲ့အတူ အောငျမွငျတဲ့ မငျးသား တဈလကျအဖွဈရပျတညျနခေဲ့ပါပွီ။ ဇဏျခီကတော့ သရုပျဆောငျ တဈယောကျ အနနေဲ့တငျမကပါဘူး တေးရေး၊အဆိုတျော တဈယောကျလညျးဖွဈသလို ဇာတျညှနျးရေးဆရာ တဈယောကျလညျး ဖွဈနပေါသေးတယျ။
ဘကျစုံထူးခြှနျတဲ့မငျးသား ကတော့ “ကိုယျတိုငျသိရှိသှားမှု” ဆိုတဲ့ စာအုပျလညျး ထှကျရှိထား တာဖွဈပွီး လူကွိုကျမြားကာ အောငျမွငျခဲ့ပါတယျ။ အခုလညျး စာအုပျအသဈ ထှကျရှိလာဖို့ရှိနပွေီး ပရိသတျတှကေတော့ စောငျ့မြှျောနကွေတာပါ။ ဒုတိယမွောကျ စာအုပျအမညျ ကတော့ “စံ ” ဖွဈပွီး ပရိသတျတှဆေီ မကွာခငျရောကျရှိ လာတော့မယျ့အကွောငျးကို “ကြှနျတေျာ့ရဲ့ဒုတိယမွောကျစာအုပျ “စံ” ကို preorder မှာရငျ လကျဆောငျထညျ့ပေးမယျ့ bookmark လေးတှပေါ.. ဒီဇငျဘာလထဲမှာ ထှကျဖို့ကွိုးစားနပေါတယျ။ Preorder တငျလို့ရမယျ့အခြိနျကို ပွနျပွောပွပါ့မယျ။” ဆိုပွီးဖဘှေ့တျချမှာ ရေးသားထားတာပါ။
ပရိသတျတှေ ကတော့ ဇဏျခီရဲ့ ကိုယျတိုငျ သိရှိသှားမှု ဆိုတဲ့ စာအုပျကနပွေီး အတှေးတှေ ထပျတူကပြွီး ကွိုကျနှဈသကျခဲ့ကွရသလို ဒုတိယမွောကျ စာအုပျကလညျး ပိုတောငျကောငျးမှနျ နမေလားဆိုတာ ဖတျကွညျ့ခငျြနကွေပွီ ထငျပါရဲ့နျော….
‌မောင်ချိုလေးရဲ့ အကူအညီကြောင့် အလုပ်ကလေး တစ်ခု အဆင်ပြေ သွားကြောင်းကို ပြောပြလာတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု